फेरि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति चौतर्फी विरोध, | Sindhu Jwala
फेरि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति चौतर्फी विरोध,
विपक्षी दलले गरे विघटनको भर्सना, विज्ञ भन्छन–‘ गलत नजिर’
जेठ ७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसंगै हिजो राती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन् । संसद विघटन गरेसंगै सरकारले कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते गरी दुईचरणमा चुनावको घोषणा गरेको छ । यो कदमलाई भने चौतर्फी आलोचना भएको छ । विपक्षी दलहरुले समेत संविधानको खिलाफमा भएको भन्दै घटनाको भर्सना गरेका छन् ।
संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने हो कि भन्ने अड्कलबाजी भएको थियो । संविधानका जानकारहरुले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताईरहँदा मध्यरातमै संसद विघटन गरिएको छ ।
विपक्षी दलमा अविश्वासको प्रस्तावबारे सहमति नजुटेर माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय नलिँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले शंकाको नजरले हेरेका थिए ।
काँग्रेससँगको छलफलपछि ओलीले फेरि असंवैधानिक बाटो समातेर पुस ५ कै जस्तो कदम उठाउने धेरैको आशंका थियो ।
प्रष्ट अल्पमतमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि विपक्षी दलका नेताहरुमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने त्रास बनेको थियो ।
सोही त्रासका बीचमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।
उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बूढानीलकण्ठमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेतासँगको छलफलमा पनि चुनावको चर्चा गरेपछि विपक्षीहरूको आशंकालाई थप बल मिलेको थियो ।
शुक्रबार माधव नेपाल पक्षको २६ सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने भएपछि विपक्ष दलबाट शेर बहादुर देउवालाई १ सय ४९ को हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याईएको थियो । तर त्यस अघि नै ओलीले ३२ जनाको नक्कली हस्ताक्षर गरेर १ सय ५३ संख्या पु¥याएर राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेका थिए । मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि परेको दुवै दाबी नपुग्ने वक्तव्य आयो । देशवासी निद्रामा भए पनि बालुवाटार जागा थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मन्त्रीहरुलाई साँझ सात बजे नै बोलाइएको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य कुर्दा मध्यरात भएको थियो । निर्णय गर्दा रातको १ बज्यो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा झण्डै २ बजेको थियो ।
यो घटनालाई पुष ५ गतेको संज्ञा दिईएको छ । तर त्यतिबेला दिउँसो संसद् भंग गरिएको थियो । यसपटक भने मध्यरातसम्म कुर्नु पर्याे ।
५ पुसको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । तर यो पटक राष्ट्रपतिसँग मिलेमलोमा संविधानको प्रक्रिया पुर्याएर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना असम्भव जस्तै छ । तर घोषित मितिमा चुनाव हुनेमा धेरैलाई शंका छ ।
यो घटनालाई नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृंखलाको क्लाइमेक्स भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसको सामाना गर्न ओली र राष्ट्रपतिले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने समेत उनले चेतवानी दिए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष हुने बताए । विज्ञहरुले समेत यो घटनालाई गलत नजिरको रुपमा स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
स्मरण रहोस शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै संसद् भंग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
This entry was posted in समाचार, विशेष. Bookmark the permalink.
पार्टीको हित विपरित कार्य गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई कारबाही
केश अनुसन्धान तथा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ टिमलाई एकदिने अभिमूखि कार्यक्रम
संस्थाको सहयोगमा नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
भोटेकोशीले बगाउँदाबगाउँदै यसरी बाँचे सुवेश …
उपमेयरका प्रत्यासी सहित दर्जनौं नेकपामा प्रवेश